စည်းကမ်းရှိစွာ အမှိုက်ပစ်ဖို့ အနုပညာရှင်တို့ အကြံပြု ⋆ Popular
လူသား တစ်ယောက်ချင်းစီ တိုင်းအတွက် နေ့စဉ်ရုန်းကန် လှုပ်ရှား စားသောက် နေထိုင်ကြရာမှာ မလိုအပ်တော့တဲ့ စွန့်ပစ် ပစ္စည်းတွေ၊ တစ်နည်း အားဖြင့် အမှိုက်တွေ ဆိုတာ ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီ အမှိုက်ကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်တတ်ဖို့ လိုအပ်သလို တချို့ အမှိုက်တွေကိုလည်း အလေ အလွင့်မရှိ ပြန်လည် အသုံးချတတ်ဖို့လည်း လိုအပ်လှပါတယ်။ အမှိုက် ကင်းစင်မှ တိုင်းပြည် လှပမှာပါ။ အမှိုက်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချ တတ်နိုင်မှ တိုင်းပြည် တိုးတက်မှာပါ။ ဒါကြောင့် အမှိုက်နဲ့ပတ်သက်လို့ အနုပညာရှင် တွေကကော ဘယ်လိုအမြင်တွေ ရှိတတ်ကြ သလဲ ဆိုတာ သိရှိနိုင်ဖို့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ် ခဲ့ပါတယ်။
အမှိုက်ပစ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာပဲ အမှိုက်ပစ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။
အခုကတော့ လမ်းသွားရင်း နဲ့လည်း အမှိုက်ချသွားတော့ တာပဲ . . . . .
အမှိုက်ကိစ္စ ကတော့ လူတစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းစီမှာ ရှိရမယ့် စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဆိုင်နေတယ်။ အမှိုက်ပစ် ဆိုတဲ့ နေရာမှာပဲ အမှိုက်ပစ်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ အခုကတော့ လမ်းသွားရင်း နဲ့လည်း အမှိုက်ချ သွားတော့တာပဲ။ ကိုယ့်အမှိုက်ကို ကိုယ်သေချာ မစွန့်ပစ်ကြ ဘူး ဖြစ်နေတာပေါ့။ စည်းကမ်း တော့ လိုက်နာသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အမှိုက်တွေကို အခုအချိန် အထိ ပစ်မြဲ ပစ်နေကြတုန်းပါပဲ။ အမှိုက် ပုံတွေ နဲ့ လမ်းတွေမှာ ဘယ်လိုမှ မလှပ ဘူးလေ။ အဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ဦး တစ်ယောက် ချင်းရဲ့စိတ်ဓာတ် တွေ ပြင်ရမယ်။ အများကြီး ကြိုးစားပြင်ဆင် ကြရပါမယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် ကောင်းအောင် အရင် ကြိုးစားပြီးမှ တိုင်းပြည် အတွက် ကောင်းအောင် ဆက်လုပ်ဆောင် ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းရဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေကို ပြင်ဆင် သွားရမှာ ဖြစ်တယ်လို့ မြင် ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးကိုလည်း ထိခိုက်နိုင်ပါတယ် . . . . .
မြို့တော်ကြီး သန့်ရှင်းဖို့ အတွက် အားလုံး စည်းကမ်းရှိမှ အဆင်ပြေ မှာ။ နေ့တိုင်း အမှိုက်တွေကို လိုက်ရှင်းဖို့ ကလည်း အဆင်မပြေဘူး။ စည်းကမ်းရှိတဲ့ နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သွားရင် ကိုယ့်နိုင်ငံ သည်လည်း တန်ဖိုး ရှိတဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်သွားမယ်။ ကျန်းမာရေးလည်း ညီညွတ် သွားမယ်။ အမှိုက်တွေကို စနစ်တကျနဲ့ မပစ်ရင် ကျန်းမာရေးကိုလည်း ထိခိုက် နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အမှိုက်ကအစ စည်းကမ်း ရှိရှိ ပစ်မယ် ဆိုရင် ကိုယ့်နိုင်ငံ အများကြီး တိုးတက်လာမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့ အမှိုက်ကို ခွဲ ထားတာက ၃မျိုး၊ အမှိုက်စို၊ အမှိုက်ခြောက်၊ Recycle ဆိုပြီး ခွဲထားတယ်။ အမှိုက်ပုံးတွေ ဆိုရင်လည်း အရောင်တွေ နဲ့ ခွဲထားတယ်။ တချို့ဆို မသိကြဘူး။ တွေ့တဲ့ အမှိုက်ပုံးမှာ အမှိုက်စို ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမှိုက် ခြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပစ်ကြတယ်။ အဲဒါလေးကို လူတိုင်း သိထားသင့်တယ်။ သိမ်းတဲ့သူလည်း လွယ်တယ်။ အကျိုးရလဒ် လည်းများတယ်။ ဒါတွေကို အကုန်လုံး လိုက်နာသင့်တယ်။ သိသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အမှိုက် ဆိုတာက တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်း စီက
သန့်ရှင်းမှ တစ်နိုင်ငံလုံးက သန့်ရှင်းမှာ . . . . .
အရင်ကဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံမှာ အကုန်လုံးက အမှိုက်ကို အလွယ်တ ကူပစ်ကြတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း မှာတော့ အဲလို အလွယ်တကူ ပစ်တာ သိပ်မရှိတော့ဘူး။ အသိဥာဏ်တွေက ပိုပြီးတိုးတက်လာတယ်။ အမှိုက် ဆိုတာက တစ်ဦး တစ်ယောက်ချင်းစီ က သန့်ရှင်းမှ တစ်နိုင်ငံလုံးက သန့်ရှင်းမှာ။ ကိုယ့်ရဲ့ အမှိုက်တွေကို အလွယ်တကူ မပစ်မိဖို့၊ သူ့နေရာနဲ့ သူပစ်ဖို့က တစ်ဦးတစ်ယောက် ချင်းစီ လိုက်နာ မှ ကမ္ဘာကြီးက လှပမယ်။ အမှိုက်တွေကို စနစ်တကျ ပစ်မယ်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးတွေလည်း ဒီထက် မက ကောင်းမယ် လို့ ထင်ပါတယ်။
သုံးလို့မရတဲ့ အမှိုက်တွေ ဆိုရင် သေချာစွန့်ပစ်ဖို့ လိုတယ်။
ပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေကလည်း . . . . .
အမှိုက်မှာဆိုရင် ပလတ်စတစ် အမှိုက်ဆိုရင် နှစ်ပေါင်းများစွာ မပျက်စီးတဲ့ အမှိုက် လို့ပြောရမယ်။ တချို့နိုင်ငံတွေ မှာဆိုရင် အမှိုက်ကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ် ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း မှာက မြန်မာနိုင်ငံကသူ တွေက အမှိုက်ကို အလွယ်တကူ စွန့်ပစ်ဖို့ ရှက်လာကြ တာကို တွေ့ ရ တယ်။ တချို့ပလတ်စတစ် အမှိုက်တွေ ဆိုရင် Recycle ပြန်သုံးလို့ရတာတွေ ရှိတယ်။ သုံးလို့မရတဲ့ အမှိုက်တွေ ဆိုရင် သေချာစွန့်ပစ်ဖို့ လိုတယ်။ ပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေ ကလည်း နိုင်ငံကြီးသား ပီသအောင် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဖို့လို ပါတယ်။ စည်ပင် သာယာ ကလည်း သူတို့လုပ်နိုင် သလောက်ပဲ သူတို့လုပ်ပေး လို့ရတယ်။ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့လည်း စနစ်တကျ စွန့်ပစ်မှ သူတို့လည်း မပင်ပန်းတော့ဘူး။ ဒီမြန်မာပြည်လည်း ဒီထက်မက အမှိုက်ကင်းမဲ့တဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်လို့ရမယ်။
ပြည်သူတွေကနေ အမှိုက်မချခြင်းဖြင့် ကြုံရာနေရာမှ
ကွမ်းတံထွေးမထွေးခြင်းဖြင့် ကူညီမယ် ဆိုရင်တောင် တိုင်းပြည်က . . . . .
အမွန်းက နိုင်ငံရေးသမားလည်း မဟုတ်တော့ နိုင်ငံရေးကို ပြောပြ စရာ၊ ထောက်ပြစရာ အဲဒီလောက်ကြီး အကြောင်း မရှိဘူး။ နိုင်ငံရေး ကို အမွန်းတို့နိုင်ငံ ခေါင်းဆောင်တွေက ကြိုးစားပြီး လုပ်နေတယ်ဆိုတာ ယုံ ကြည်တယ်။ အဲဒီတော့ ပြည်သူ အချင်းချင်းကို အနုပညာရှင် တစ်ယောက် အနေနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် ပြည်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မြန်မာ နိုင်ငံသား တစ်ယောက် အနေနဲ့ပြောချင် တာက တစ်ခါတလေ ကျရင် ပြည်သူ၊ ပြည်သားတွေက အပြစ်တင်တာ စောတယ်လို့ အမွန်းထင်တယ်။ နိုင်ငံက တိုးတက်တာနှေး တယ်။ ပြောင်းလဲမှု မမြင်ရဘူးတွေ ပြောတာ ကြားရတယ်။ အဲဒီအခါကျတော့ အမွန်း အံ့သြတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၆နှစ်လောက်က မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ အခုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ တော်တော်ကို ကွာသွားပါပြီ။ ရန်ကုန်ကိုပဲ ကြည့်လိုက်ပါ။ ခုံးကျော်တံတား ကြီးတွေ ရှိလာပြီ။ လူတိုင်းဖုန်း သုံးနိုင်ပြီ။ ဒါပေမဲ့ တိုးတက်မှု ကတော့ သူ့ဟာနဲ့သူ အချိန်ယူရမှာပေါ့။ နိုင်ငံက အများကြီး ခေတ်နောက် ကျခဲ့တာ ကိုး။ အဲဒီတော့ အဲဒါလေးတွေကို အဆိုးဘက်က မစဉ်းစားဘဲ နဲ့ ပြည်သူတွေ ကနေ အမှိုက်မချခြင်းဖြင့် ကြုံရာနေရာမှ ကွမ်းတံထွေး မထွေးခြင်းဖြင့် ကူညီမယ် ဆိုရင်တောင် တိုင်းပြည်က တော်တော်တိုးတက်သွားမှာ အမှန် ပါပဲ။ အမွန်းက အဲဒီအချက်လေး ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။